ओली सरकार ढाल्ने देउवाको यस्तो छ ‘प्लान बि’ :: रातोपाटी | EBHAGRA | Latest Online News and Blogs from Nepal
Home / Featured / ओली सरकार ढाल्ने देउवाको यस्तो छ ‘प्लान बि’ :: रातोपाटी
Narayan Kafle May 7, 2016	Featured, Top Stories Leaveacomment 161 Views
काठमाडौं– बैशाख २५, २०७३ रातोपाटी
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई उथलपुथल पार्ने आफ्नो पहिलो मिसन फेल भएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के सोच्दै होलान ? के उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने दोस्रो रोडम्याप तयार पारेका होलान ?
राजनीतिक वृतमा यस्तै–यस्तै प्रश्न उठेका बेला देउवाले ओली सरकार ढाल्ने दोस्रो योजना पनि तयार पारेका छन् । काँग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले शुक्रवार काठमाडौंमा काँग्रेस निकट सीमिति पत्रकारसँग गरेको कुराकानीमा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । प्लान ‘ए’ अनुसार काम नभएपनि देउवा प्लान ‘वि’ मा प्रवेश गरेका हुन् ।
नेता निधिका अनुसार देउवाले ओली सरकारले बजेट ल्याएलगत्तै नयाँ सरकारको लागि औपचारिक पहल गर्नेछन् । ‘राजनीतिमा सधै सफल भइन्छ भन्ने होइन । पहिलो अस्त्र असफल भएको हो । आन्तरिक तयारी तिव्र छ । अव विकल्प खोजेर बजेट ल्याउने गरि सरकार बनाउन सकिन्नँ । बजट आएकै अर्कोदिनबाट ओलीको विकल्पको गृहकार्य शुरु हुन्छ ।’ निधिले पत्रकारवीच भनेका थिए । देउवाले यसका लागि अहिलेदेखि नै आफ्ना नजिकका नेताहरुलाई तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ ।
उता एमाले र माओवादीबीच बैशाख २३ मा भएको ९ बुँदे सहमतिमा पनि बजेटपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल थाल्ने उल्लेख छ । उनीहरुले सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘संविधानको कार्यन्वयन र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि अनुकूल वातवरण सिर्जना गर्ने उदेश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने ।’ उल्लेख गरेका छन् ।
यो सहमति अनुसार एमालेले काम अगाडि नबढाए यसैको जगमा माओवादीले विकल्प खोज्न सम्भावना रहनेछ । यस्तो बेला एमाले–माओवादी समीकरण भत्केर काँग्रेस–माओवादी समीकरण बन्न सक्ने स्रोतहरु बताउँछन् । ‘काग्रेस नयाँ समीकरणका लागि पहल गर्छ ।’ काँग्रेसका एक केनद्रीय सदस्यले भने ।
काँग्रेस सभापति र संसदीय दलको नेता भएपछि देउवाले ओली सरकार ढाल्ने कदम अगाडि बढाएका थिए । तर, उनी आफ्नो पहिलो कदममा असफल भएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्ट समूहले उनको आलोचना गरेको छ । यद्यपी देउवा समूहले ओली सरकार ढाल्ने पछिल्लो योजनामा शेखर कोइरालासहितका केही नेताको भने समर्थन रहेको दावी गरेको छ । काँग्रेस सूत्रका अनुसार पहिलो कदममै झट्का लागेपछि सभापति देउवा तनावमा छन् ।
त्यसैवीच देउवाले नयाँ सत्ताा समीकरण तयार नहुँदासम्म पार्टी पदाधिकारी चयन नगर्ने नीति बनाएका छन् । ‘देउवाले प्रधानमन्त्री नहुन्जेल पदाधिकारी बनाउँदैन । मन्त्री हुनेलाई पदाधिकारी बनाउँदैनन् । एक व्यक्ति एक पदको नीति अगाडि सारेका छन् ।’ देउवा निकट स्रोतले बतायो ।
27339 Total Views 16 Views Today
Previous कमल थापाले भने, ‘सरकार कम्तिमा डेढ वर्ष टिक्छ’ :: नयाँ पत्रिका
Next मंसिर पहिलो साता स्थानीय चुनाव: प्रधानमन्त्री :: अन्नपुर्ण पोस्ट